Tilmaamaha lagu baranayo lamaanahaaga iyo hagaajinta xiriirada dhow | Ragga Stylish
Maanta waxaa jira dad badan oo ka soo horjeeda fikradda jacaylka oo ah mid taariikhi ah sidii ay ahayd waqtiyadii hore. Waa wax aan ka badnayn milicsiga isbeddelka muuqaalka bulshada iyo xiriirka galmada. In kasta oo qaabkan oo dhami isbeddelay oo galmadu ay wax badan ka heli karto qof walba, had iyo jeer waa inaad ku sameysaa iyada oo ilaalin ah. Sidaa darteed, waa muhiim in la isticmaalo kondhomka oo dooro midka kuugu haboon inaad galmo sameyso.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa muhiimada cinjirka galmada iyo galmada maanta.
1 Jacaylka maanta
2 Ahmiyada cinjirka galmada
3 Qalabka galmada
4 Dhisida jacaylka
Jacaylka waqtiyada casriga ah wuu is badalay. Waxaan joognaa waqti ay jiraan isbeddelo badan iyo dalabyo isugu jira heer jinsi iyo bulsho. Tusaale waa markasta oo aan nahay su aalo badan ka weydiinaya qaabka loo fahmo xiriirka lamaanaha. Hadda sidii hore ma aha, laakiin sidoo kale waxaan leenahay polyamory oo qof waliba dareemo inuu xor u yahay inuu ku noolaado xiriirkiisa isagoo aan ku dhicin nacaybka dadka kale. Waxaan u baranay xaqiiqda ah in cilaaqaadyadu ay yihiin hal xaas oo ay jiraan laba qof oo keliya.
Si kastaba ha noqotee, markay tahay jacaylka, muhiimadda is-jacaylka ayaa laga hormariyaa fikradda ah inuu ku tiirsanaado shucuur qof kale. Magac ahaan, kuma farxi kartid iyadoo kuxiran inaad qof kale lajoogtid iyo inkale. Waa inaad ku faraxdaa naftaada adigoon cidna u baahnayn. Jacaylku waa inuu noqdaa mid waayo-aragnimo gebi ahaanba leh oo caafimaad leh oo noloshaada u horseeda qodobbo wanaagsan. Waa inay soo bandhigtaa qiyam la wadaago sida is ixtiraam iyo isgaarsiin.
Haddii aan dooneyno inaan shukaansi aad u wanaagsan la yeelano qof, waa inaan maanka ku haynaa in qof walba uu ka duwan yahay. Qof kastaa waa inuu dhisaa nambarkiisa gaarka ah oo uu helaa waxa aan jecel nahay oo naga farxiya. Waxaa jira alaabo badan oo caruurtu ku ciyaarto oo dhiiri galinaya howlaha galmada. Waa qalab aad u fiican is-xakamaynta iyo is-aqoon Waxay naga caawinayaan inaan sahamino wixii ka baxsan wixii aan horay u ogaanay oo aan uga baxno aaggeenna raaxada galmada. Gaar ahaan, cilaaqaadyadan hal-abuurka ah waxaa lagu aasaasay cilaaqaadkaas wadaagga ah ee dhaadheer.
Nooc kasta oo xiriir ah, waxaa muhiim ah in la ogaado lana isticmaalo noocyada kala duwan ee cinjirrada in jira
Ahmiyada cinjirka galmada
Kondhomku waa habka ugu isticmaalka badan uguna raqiisan adduunka ee ka hortagga uurka. Waxaa jira kumanaan qaab iyo dhadhan waxayna kaa caawinaysaa kahortaga cudurada galmada lagu kala qaado iyo uurka aan loo baahnayn labadaba. Waa muhiim inaad ku tababarto galmo aamin ah qofkasta oo aad rabto. Waxaa jira kondhomyo dhadhan fiican leh oo galmada u keenaya nolosha. Waxaa jira noocyo kala duwan oo dhadhan ah oo ay ka mid yihiin shukulaatada, strawberry, reexaanta, iyo qaar kaloo badan.
Maskaxda ku hay in kondhomku aanu ahayn kaliya ragga, laakiin sidoo kale dumarka. Waxaa jira cinjir cinjirka xubinta taranka inkasta oo aan weli si fiican loo aqoon, hadana waxaa jira dad badan oo bilaabaya inay waxka qabtaan. Kondhomka dheddigga waa tuubbo caag ah oo jilicsan oo leh xirmo xiran. Dhammaad kasta wuxuu leeyahay giraan ama gees. Giraantu waxay ku taalaa dhamaadka xidhan oo siilka si hoose ayaa loo gelinayaa makaanka afkiisa in tuubada marwalba hal meel lagu dhigo. Giraanta ku taal dhamaadka furan waa tan ka hartay furitaanka siilka.
Hase yeeshe, waxaa jira dad badan oo xasaasiyad ku leh cinjirka 'latex'. Dadkani waxay la kulmaan astaamo qaar oo u dhexeeya casaan iyo nabarro ilaa sanka oo dareera iyo indhaha oo biyo qaba. Waxaa laga yaabaa inaad xasaasiyad ku yeelato cinjirka 'latex' mana ahan waxa aad jeceshahay. Si kastaba ha noqotee, uma baahnid inaad ka walwasho tan maadaama ay jiraan cinjirka galmada lagu diyaariyo waxyaabo kale oo aan ahayn ma laha cinjirka laakiin waa polyurethane.
Alaabta carruurtu ku ciyaaraan waxay ballaariyaan jaangooyada shucuurta kacsiga leh. Intaa waxaa dheer, iyaga oo ku xiraya xaaladda hadda jirta, alaabada carruurtu ku ciyaaraan ayaa ah saaxiibka ugu fiican ee yareyn kara heerarka walaaca, naga caawiya inaan hurdo la seexanno oo aan dareemno farxad iyo nasasho badan. Xaqiiqdii, siigaysiga (ama dariiqayaga ama alaabta carruurtu ku ciyaarto) waxay maskaxdeena u keentaa inay soo saarto walxo na siiya isla markiiba caafimaad jireed, jinsi iyo mid shucuurba leh: la siidaayo raaxada galmada ka dib iyo / ama kacsiga, sida serotonin iyo dopamine. Endorphins-ka la siidaayay ayaa si toos ah masuul uga ah inay naga dhigaan kuwa wanaagsan galmada ka dib waxaan rajeyneynaa inaan ku celino khibradan, kaligey ama lamaane.
U soo noqoshada jacaylka, mid ka mid ah tilmaamaha ugu fiican ee lagu abuuro xidhiidh ma aha in jacayl la raadsado, laakiin in la dhiso. Jacaylku wuxuu u baahan yahay dadaal iyo daryeel maalinba maalinta ka dambeysa. Sidoo kale, waxaan had iyo jeer ka hadalnaa sida wanaagsan ee xiriirka loo ilaaliyo, laakiin waxaan ilaawnaa inaan daryeelno jaceylkeenna. Waxaan u ogolaaneynaa nafteena inaan khaladaad sameyno, dareemo xumaan, aqoonsano guulahayaga iyo wanaaggeena iyo tan lamaanaheena
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan cilaaqaadka hadda jira iyo muhiimadda ay leedahay isticmaalka cinjirka galmada lagu badbaado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tilmaamaha lagu baranayo lamaanahaaga iyo hagaajinta xiriirka dhow